‘जेठ २५ गतेभित्र कर तिर्न दिएको निर्देशन अवज्ञा गर्नुस्’ - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौंः प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले जेठ २५ गतेभित्र कर तिर्न राजश्व विभागले दिएको निर्देशन अवज्ञा गर्न आग्रह गरेको छ । बुधबार बिहान ट्वीट गर्दै कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले निर्देशन अवज्ञा गर्न आग्रह गरेका छन् ।
शर्माले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘सांसद विकास कोष खारेज गर्न साहस नराख्ने, अनि ठप्प व्यवसायलाई कर ताकेता ? जेठ २५ भित्र कर तिर्न नसक्ने भद्र अवज्ञाको अर्को विकल्प छैन ।’
याे पनि पढ्नुस नेपाली भूभाग कुनै पनि हालतमा छोडिन्नः महामन्त्री कोइराला
उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘गलैंचा, जिमखाना र यो ताकेता ! सोध्न चाहन्छु– कसैको व्यक्तिगत सनकमा देश चल्दैछ कि यही हो, कम्युनिस्ट समाजवादको आधारशिला !’
सांसद बिकास कोष खारेज गर्न साहस नराख्ने अनि
ठप्प ब्यवसायलाई कर ताकेता ? @hello_sarkar
जेठ २५ भित्र कर तिर्न नसक्ने #भद्र_अवज्ञा को अर्को विकल्प छैन !
गलैंचा,जिमखाना र यो ताकेता l शोध्न चाहन्छु कसैको ब्यक्तिगत सनकमा देश चल्दैछ कि यहि हो @PM_Nepal कम्युनिस्ट समाजवादको आधारशिला ?? pic.twitter.com/rU7RSK5oaO
— Bishwa Prakash शर्मा (@bishwaprakash77) June 2, 2020
मंगलबार विभागले सूचना प्रकाशन गरी सबै खालका कर यही जेठ २५ गतेभित्र तिर्न सम्बन्धित सबैलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसको व्यवसायीले समेत विरोध जनाइरहेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस सरकार पूरै असफल भयो, जनता निरास छन्ः नेता महत
ट्याग्स: कर, नेपाली कांग्रेस, राजश्व विभाग, विश्वप्रकाश शर्मा